ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း4သင်ချိန်းတွေ့သိထားသင့်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြည့်ရှုနေရာတိုင်းချိန်းတွေ့အကြံပြုချက်နှင့်အတူရှိနေသည်များမှာ. တဦးကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေလူမျိုး၏အပြည့်အဝကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်ကြောင့်လူတိုင်းကသူတို့ပြောဆိုခွင့်ရှိစေလိုသည်ဟန်. တကယ်တော့မှာအားလုံးလွယ်ကူမပါသောအခါထိုကြောင့်မကြာခဏသူတို့ကဒီလောက်တောင်လွယ်ကူမှုတ်စေ. အရှိကိုဆိုရင်ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှသောအိပ်မက်သည်လူကိုဖြစ်စေ, မိန်းမတွေ့ဆုံကြင့်. ဒါနဲ့တူအမှုအရာကိုပြောမသွားဘူး, “ကိုယ့်နောက်ကျောကိုသင်ကိုင်ထားသည်အတိုင်းကျော်ရဘို့သွားကြဖို့ရှိသည်။” ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်ဖတ်ရှုဖို့မလိုအပ်မယ်လို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်. ဒါနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်မတောင်းဆိုပါဘူး. အဘယ်သို့ငါပြုပါပြောဆိုချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပေ၏. ကျနော်တို့အတူတကွဤအမှုအလုံးစုံ၌ရှိကြ.
ဒီဖြစ်နိုင်သည်ဟုကိုသင်ချိန်းတွေ့ဂိမ်းဝင်သောအခါမှတ်မိဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်းအလေ့အကျင့်ကိုပြုကြရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်. ထိုအခါငါကျနော်တို့အားလုံးနီးပါးမှာကြှနျုပျတို့ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုအထင်ကြီးစေရန်အလို့ငှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုလားစဉ်းစားလမ်းကိုသရုပ်ဆောင်၏ပြစ်မှားရာရောက်ထင်ပါတယ်. သင်တို့မူကား, စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာလမ်းကိုရှာတွေ့သွားရိုးရိုးဘယ်တော့မှနေကြတယ်. စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ connection တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ဖြစ်ကြသည်အတိအကျအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုမြင်လျှင်ကြောင့်ဘို့သင့်ကို adoring ဖြစ်ပါတယ်. အားလုံးတဲ့အခါတသက်သရုပ်ဆောင်တဆင့်သွားကြသည်? သို့သော်ဤအတူတာဝန်ရှိလာ. အလှည့်တွင်သင်သည်ထိုသူတို့နေသောများ၏ရိုသေလေးစားမှုရှိရမည်. ဒါကြောင့်ဥပမာသင်ကခက်ခဲပါလိမ့်မယ် rocker ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ pop အတွက် cheesiest ၏ cheesiest ကြိုက်. သင်သည်ထိုသူတို့သင်လေးစားရန်ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့သူတို့ကိုရိုသေလေးစားရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြောင်းလဲပစ်ရန်မကြိုးစားပါ. ကျွန်မကြာမြင့်စွာတည်မြဲသောဆက်ဆံရေးရှိလူများကနေကြားရကြပြီ. ဒါဟာသင်ပြုနိုင်ပါသည်ပိုမိုဆိုးရွားသောအရာဖြစ်၏. ကိုယ်ကသာအမကျေနပ်မှုနှင့်ခါးသီးမှုမှဦးဆောင်.
အချို့သောကျိန်းသေအရွယ်အစားပိုကြီးလက်ဟန်ခြေဟန်တူပြု wined နှင့်ချစ်သည်ကိုခံရသောကြောင့်သင်သည်လူတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ပေါ်မှာဤကစားဘယ်လိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရလိမ့်မယ်! သို့သော်ထိုဘုံအထင်မှားများစွာသည်သူတို့၏နေ့ရက်ကာလသည်မည်မျှတောင်းဆိုနေတာပဲစာသားအလိုရှိသည့်အခါလူတိုင်းကတူကြောင်းဖြစ်တယ်. အရင်ကပြောဆိုလျက်လူကြားဖူးတယ်ငါနှင့်အတူသဘောတူညီဖို့လေ့. သင်သည်ထိုသူတို့လက်ဆောင်တစ်ခုနေကြပါတယ်လျှင်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အမှုသည်သင်တို့သူတို့ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိမှရရန်လိုအပ်ကြောင်း. ဒါဟာသူတို့ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပြသပြီးသူတို့အဘယ်သူသည်. ထိုကဲ့သို့သောပန်းပွင့်အဖြစ်အစဉ်အဆက်လက်ဆောင်တွေ, ချောကလက်နှင့် aftershave / အမွှေးနံ့သာစမှာချောပေမယ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်သင်ချိန်းတွေ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦး bit နဲ့ပိုပြီးဖြစ်သင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေအပ်စပ်ဖြစ်စဉ်များ.
ဟုတ်ကဲ့, သင်ကရှက်တတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါကဒီခက်ခဲတဲ့တစ်ဦးဖြစ်သည်. ကရှက်အပြင်ပန်းအောက်ရေမြုပ်ဘူဖောင်းထင်မြင်ချက်တစ်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုမျှမခံရသည်ဟုမဆိုလို (ကျွန်တော်တို့အများစုကစာရေးဆရာများဖြစ်လာလဲဒါကြောင့်ပဲ!) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်သိဖို့ရှိပါတယ်ကြောင့်ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နဲ့ကိုသင်တို့အားဝမ်းနည်းစွာမေတ္တာကိုရှာတွေ့၏လမ်းအတွက်ရနိုင်ယုံကြည်မှုရှိသည်အမြဲမလွယ်ကူပေ. သောသူတို့သည်မိမိတို့အကနဦးဆွဲဆောင်မှုအောက်ပါသင်ကြိုက်သို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုင်. သိသာထင်ရှားတဲ့အသက်တာ၌တူ, မေတ္တာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သင်၌သင်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုဖော်ပြသင့်ပါသည်အဘယ်သို့သောအခြေအနေများသိရန်ဘုံသဘောနှင့်အခြားသူများ၏အကြံပေးချက်ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သောအခါမူကားသင်သည်သူတို့အားသင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသိကြကုန်အံ့နိုင်တဲ့အခါ. သင့်အနေဖြင့်ရှက်တတ်စေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်ပွင့်လင်းလွန်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစား. ထိုအတူကူညီဖို့နည်းလမ်းတွေကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်သင်တန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့လိမ့်မည် (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်!), ညဦးယံ၌သင်တန်းများကိုပြုပါ, တစ်ဦး toastmasters ကိုသွားသို့မဟုတ်ပဲလူမှုရေးလေထုထဲတွင်ရှိသင်သည်တတ်နိုင်သလောက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်ရ. ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းပေမယ်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိင်. ငါ့ Mum အမြဲပြောခဲ့သကဲ့သို့, သင်သည်အခြားသောလူမျိုးအဘို့သင့်အသက်ကိုရပ်တန့်မနေသင့်.
လူကျင့်သောအလွန်ဘုံအရာသူတို့ဘယ်သို့ထင်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကကောက်ယူသောကြောင့်. ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်အကြံဥာဏ်ထိုကဲ့သို့သောသူ / သူလူဖြစ်ကောင်းသာသင်တို့အဘို့အထွက်ရှာကြတဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲလျှင်အဖြစ်သင့်လျော်သည်အဘယ်ကအကြံဉာဏ်များကိုဂရုပြု. ဒါပေမဲ့လူတွေကလူတိုင်းရဲ့အမျိုးအစားအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် type ကိုချပြီးတစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘို့အသွားသူတစ်ဦး၏အမျိုးအစားကိုအကြှနျုပျတို့အားထူးခြားသည်. သင်က hippy တစ်ခုသို့မဟုတ် beatnik ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လယ်သမားနှင့်အပြန်အလှန်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စေမယ့်ဘယ်တော့မှမကြသည်. ချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အခန့်မှန်းရခက်သောကြောင့်, ဝန်ခံရမည်ချွင်းချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ယေဘုယျဝေါဟာရငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူကိုက်ညီကျနော်တို့နှင့်အတူအဆင်ပြေနေသောသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အတူအဘယ်သူကျွန်တော်တို့ကို excites သူတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါသည်. သူတို့သည်သင်၏ချစ်ရသူကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ကောင်းသောအရာမင့်’ အတည်ပြုချက်မတံဆိပ်. သူတို့ကတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့သူများမဟုတ်. သင်မည်. ထိုအသင်သည်အဘယ်အရာကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုသင့်အဘို့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခွင့်မပြုသူတို့ကိုမပြော. နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဇအတိုင်းအများအားဖြင့်ညာဘက်ကိုသူများဖြစ်ကြ၏.